Ku soo dhawaw degmada!
Si diirran ugu dhawaw degmada Sollentuna!
Halkan waxaa ku jira macluumaad aasaasi ah oo ku aaddan waxa ay tahay degmada Sollentuna, waxa ay degmadu ka mas’uul tahay oo ay gacan ka geysan karto iyo sida aad degmada ula soo xiriiri kartid.
Maxay tahay Degmada Sollentuna?
Swiidhan waxay u qeybsantahay 290 degmo, degmada Sollentunana waa mid kuwaas ka mid ah. Degmo kasta waxaa ka jira wakiillo dhammaantood la soo doortay, hoggaamiyayaal degmo, oo go’aan ka gaaraya arrimaha degmada. Guddiga degmada, oo laga soo doortay hoggaamiyayaasha degmada ayaa hawlaha wax qabadka hoggaaminaya. Hoggaamiyayaasha degmadu waxay xitaa dad u dooranayaan guddiyada kala duduwan ee degmada. Guddi wuxuu ka koobanyahay siyaasiyiin diiradda saaraya maamulka, si hawlaha shaqada looga gaaro ula jeeddada ay hoggaamiyayaasha degmadu u dejiyaan. Siyaasiyiinta guddigu waxay metelayaan dhammaan xisbiyada degmada, iyadoo wax ugu qeybsanyihiin sida hoggaamiyayaasha degmada ay wax ugu qeybsanyihiin. Guddiyada waxaa ka hoos shaqeeya xafiisyo iyo maamullo leh shaqaale saraakiil ah oo fulinaya go’aamada siyaasiyiinta, mas’uulna ka ah shaqada maalinlaha ah ee hawlaha shaqada ee degmada. Saraakiishaas ma magacaabaan siyaasiyiintu.
Afarti sanaba hal mar, marka ay jirto doorasho guud, waxay muwaadiniinta degmadu dooranayaan siyaasiyiin degmada xukuma. Tirada codeysa ayaa kala saareysa sida boosaska hoggaamiyayaasha degmada, guddiga degmada iyo guddiyada kale loogu qeybinayo xisbiyada.
Xaq ayaad u leedahay in aad doorashada degmada ka codeysid haddii:
aad tahay muwaadin swiidhish ah, degmadana ku qorantihid
aad tahay mid ka mid ah muwaadiniinta waddamada Midowga Yurub xubnaha ka ah ama muwaadin u dhashay Island ama Norway oo aad degmada ku qorantihid
aad tahay muwaadin u dhashay waddan kale oo aan ahayn kuwa kor lagu xusay oo aad Swiidhan degganeyd seddax sano oo isku xig-xigta maalinta doorashada ka hor, aadna ku qorantahay degmada.
Dhammaan dadka deggan degmadu waxay bil walba bixiyaan canshuur degmo. Lacagaha khidmada ah iyo kaalmada xukuumadda ayaa si wada jir ah canshuurta degmada isula maal geliya hawlaha wax qabadka ee degmada iyo adeegyada ay degmadu bixiso.
Shaqada degmada iyo aagagga mas’uuliyadda
Degmadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa in bulshada la hormariyo iyo in la abuuro adeegyada muwaadiniintu ay si maalinle ah ula kulmaan.
Degmada waxay mas’uuliyadi ka saarantahay in ay hubiso in ay jiraan xannaano carruureed, dugsi xannaano, dugsi heese-dhexe, dugsi sare iyo dugsi loogu tala galay dadka caqliga dhiman. Waa in sidoo kale ay abaabushaa waxbarasho dadka waaweyn oo degmadu leedahay, swiidhish ajaanibta loogu tala galay iyo hey’ad adeeg bulsho. Degmadu waa in ay xannaano siisaa dadka waaweyn iyo dadka naafanimada qaba.
Degmadu waa in ay qorshe u sameysaa magaalada iyo dhismooyin cusub, ayna hubisaa in ay deegaanno jiraan. Waxay hubineysaa in ay jiraan badbaado xagga caafimaadka ah iyo badbaado xagga bey’ada ah, in ay nadaafadi jirto iyo in muwaadiniintu ay qashinka iska tuuri karaan.
Degmada ayaa mas’uul ka ah adeegga badbaadada iyo in ay hubiso in deegaannada oo dhan ay ka jiraan biyo iyo bullaacado ay wasakhdu marto. Ugu dambeyn waa in degmadu ay maktabad lahaato, halkaas oo muwaadiniintu si lacag la’aan ah ay tusaale ahaan uga deynsan karaan buugaag iyo wargeysyo.
Dhamaan waxyaabaha kale ee ay degmadu sameyneyso waa wax aan khasab ku ahayn. Tusaale ahaan waxay degmadu gacan ka geysaneysaa in ay jiraan goobo jimicsi, meel lagu dabaasho, dugsi dhaqan, matxaf iyo wax kaloo badan. Waxaas oo dhan waxaa loo sameynayaa in kuwa degmada deggan ay ku faraxsanaadaan, ayna wacnaan dareemaan.
Haddii aad dooneysid in aad la xiriirtid degmada waxaa hor iyo horraan habboon in aad la xiriirtid xarun xiriir. Xarunta xiriirku waa adeegga macaamiisha ee degmada, waxaana meelahaas ka shaqeeya gacanhayayaal fara badan oo aqoon u leh kuna takhasusay dhammaan aagagga degmada.
Tusaale ku aaddan waxa ay xarunta xiriirku gacan ka geysan karto waa:
Codsashada dugsiyada iyo dugsiyada xannaanada
Codsashada dhigashada swiidhishka (SFI)
Helitaanka macluumaadka ku aaddan hawlaha wax qabadka ee xilliga firaaqada
Helitaanka macluumaadka caawimaadda ay degmadu siineyso dadka da’da ah iyo dadka kale ee baahida gaarka ah qaba
Codsashada taageerada masruufka
Helitaanka macluumaad ku aaddan taageero turjumaan
Xarunta xiriirku waxay khadka taleefanka, e-mail iyo baraha bulshada uga jawaabeysaa su’aalaha, sidoo kalana albaabka guriga degmada ayey ku qaabileysaa booqadayaasha. Halkan waxaad la imaan kartaa arrimaha oo dhan iyo su’aalahaaga, waxaadna tusaale ahaan kumbuyuutarka booqadayaasha u isticmaali kartaa in aad boos ka dalbatid xannaanada carruurta ama in aad isticmaashid adeegyada kale ee elekteroonigga ah ee degmada. Haddii aad dooneysid waa lagu hagi karaa iyadoo la adeegsanayo adeegga elekteroonigga ah.
Waxaad xarunta xiriirka ka heli kartaa taleefanka ah 08 579 210 00. Haddii aad beddel ahaan dooneysid in miiska laguugu caawiyo waxaad xarunta xiriirka kala xiriireysaa biblioteket, Aniaraplatsen i Sollentuna centrum, albaabka weyn ee guriga degmada. Waxaad sidoo kale e-mail u diri kartaa kontaktcenter@sollentuna.se ama gal facebook.com/sollentunakommun.
Dhammaan kuwa ka shaqeeya xarunta xiriirku waxay ku hadlaan swiidhish iyo ingiriis labadaba.
Sfi, waxbarasho dadka waaweyn oo degmadu leedahay oo ku aaddan swiidhishka ajaanibta loogu tala galay, waa waxbarasho aasaasi ah oo luqadda swiidhishka ah oo laguugu tala galay adigaaga uusan swiidhishku luqad hooyo kuu ahayn. Waxaad baraneysaa in aad swiidhish ku hadashid, akhrisid qortidna. Waxaad wax ka baraneysaa sida bulshada swiidhishku ay u shaqeyso, nolosha shaqada ee Swiidhan iyo hiddaha iyo dhaqanka swiidhishka. Marka ay koorsadu dhamaato waxaad qaadaneysaa shahaaddo. Waxbarasho kasta waa lacag la’aan.
Waxaad Sollentuna xaq ugu leedahay waxbarasho SFI oo ka mid ah waxbarashada dadka waaweyn:
Laga billaabo 1 Luulyo ee sanadka aad 16 sano buuxineysid
Haddii aad nambarro aqoonsi leedihid, kuna qorantihid degmada Sollentuna
Haddii aadan lahayn aqoon aasaasi ah oo ku aaddan swiidhishka
Haddii aad tihid 16-19 jir, aadnana heysan waxbarasho dugsi sare oo dibadda ah oo buuxda waxaad hor iyo horraan la xiriireysaa dugsiga Rudbecksskolan ee Sollentuna halkaas oo aad xaq ugu leedahay in wax laguugu dhigo.
Qofka aan swiidhishka si fiican u aqoonnin ama ay ku adagtahay in uu wax arko, maqlo ama hadlo wuxuu mararka qaarkood xaq u leeyahay turjumaan ama caawimaad xagga turjumidda qoraallada ah marka uu hey’adaha degmada la xiriirayo. Xarunta xiriirku waxay bixin kartaa macluumaad ku aaddan caawimaadda turjumaanka iyo sida turjumaanka loo ballansanayo.
Dugsiyada iyo dugsiyada xannaanada ee Sollentuna
Carruurta ilaa iyo 6 sano jir waxay degmadu siineysaa nuucyo kala duduwan oo xannaano iyo hawlo wax qabasho oo wax barid la xiriira. Dugsiga xannaanada ayaa ah nooca ugu caadiyeysan laakiin degmadu waxay xitaa bixisaa xannaano waxbarid la xiriirta/guri qoys oo maalintii carruur haya iyo dugsi xannaano oo furan. Carruurta sii waaweyn waxaa loo soo bandhigi karaa dugsi hoose-dhexe iyo dugsi sare.
Dugsiga xannaanadu waa hawl wax qabad oo barid la xiriirta oo loogu tala galay carruurta jirta 1-6 sano. Dugsiga xannaanada ayey ka billaabataa waxbarashadu oo dabadeedna usii soconeysa dugsi hoose-dhexe iyo inta nolosha ka dhiman. Halkan waxaa carruurta lagu siinayaa fursad ah in ay wax bartaan, horuumarna sameeyaan iyagoo gacmahooda wax ku abuuraya, baaraya, una ciyaaraya koox ahaan iyo iyagoo dad waaweyn ay isla jiraan. In carruurta ammaan iyo xannaano la siiyo waa shaqo dheeraad ah oo muhiim ah oo uu dugsiga xannaanadu iska leeyahay.
Dugsiga xannaanadu wuxuu sanadka oo dhan furanyahay 10-12 saacadood maalintiiba. Canuggaagu wuxuu xaq u leeyahay xannaano carruureed iyadoo laga duulayo baahida canugga iyo haddii aad tusaale ahaa shaqeysid, wax dhigatid ama shaqo raadsatid. Carruurta megengelyo doonka ahi waxay xaq dugsi xannaano ugu leeyihiin si la mid ah sida carruurta kale ee Sollentuna joogta.
Waxaad canuggaagu boos uga dalbeysaa xannaanada carruurta adiga oo adeegsanaya barta intarneetka ee degmada. Waxaad deyrta isku hal mar saf u geli kartaa shan meelood oo la kala dooran karo. Waqtiga safka ee canuggaaga waxaa laga billaabayaa taariikhda uu codsigu yimid laakiin ugu horreyn seddax bil ka bacdi marki uu canuggu dhashay. Dugsi kasta oo xannaano iyo xannaano la xiriirta waxbarid/guriga qoyska maalintii carruurta haya isaga ayaa safka mas’uul ka ah. Waxaa lagula soo xiriiri doonaa marka uu boos ka bannaanaado dugsiga xannaanada/ xannaanada la xiriirta waxbaridda ee aad dooratay.
Xannaano waxbarid la xiriirta/guri qoys oo maalintii ah
Xannaanada waxbaridda la xiriirta/guriga qoyska ee maalintii carruura haya waa meelo ay ka socdaan hawlo waxbarasho la xiriira oo badanaa uu wado guri qoys carruurta xannaaneeya. Hawshu waa in horuumarka carruurta iyo waxbarashadooda ay dardar geliso, waxayna u sameysantahay si carruurta u diyaarineysa sii wadashada waxbarashada.
Lacag khidmo ah
Lacag khidmo ah ayaad ku bixineysaa dugsiga xannaanada ee canuggaaga ama xannaanada waxbaridda la xiriirta/guriga qoyska carruurta xannaaneeya. Inta ay lacagta khidmada ahi la ekaaneyso waxaa xukuma dakhligaaga.
Dugsi furan oo xannaano
Dugsiga furan ee xannaanada waxaa loogu tala galay adigaaga canug yar guriga la jooga. Wax lacag ah kuma fadhiyo, umana baahnid in aan hor ahaan canugga uga soo qortid. Dugsiga furan ee xannaanadu wuxuu bixinayaa hawlo wax qabad oo koox ahaaneed oo waxbarid la xiriirta, carruurtuna kali-kali ama koox ahaan ayey u ciyaareysaa, isla mar ahaanta ay dadka waaweyn fursad u helayaan in ay wax wadaagaan xiriirna isla yeeshaan. Ka waalid ahaan dugsiga furan ee xannaanada waad la joogeysaa canuggaaga mar walba.
Dugsiga hoose-dhexe wuxuu ka koobanyahay dugsi toban sanadle ah oo ka billaabanaya sanadka uu canuggu 6 sano buuxinayo. Wax dhigashada dugsiga hoose-dhexe waa mid khasab ah, waana lacag la’aan. Caadi ahaan sidoo kale waaliddiinta wax kharash ah ugama baxayaan dawada, cuntooyinka dugsiga, daryeelka caafimaadka dugsiga iyo dugsi u qaadidda.
Waxbarashadu waa waajib, taasoo ka dhigan in carruurtu waxbarasho ay xaq u leeyihiin, ayna isla mar ahaantaas waajib ku tahay in ay waxbarashada ka qeyb qaataan. Canugga waalidkiisa ahaan waxaa waajib kugu ah in aad hubisid in canuggu uu si buuxda u dhigto iskoolkiisa.
Sollentuna waxaa ka jira soddomeeyo dugsi oo hoose-dhexe oo ay waddo degmadu ama shirkado gaar loo leeyahay. Dugsiyada qaarkood waxay takhasus gaar ah u leeyihiin maaddooyin gaar ah, tusaale ahaan muusiko iyo xisaab. Dhammaan dugsiyadu waxbarasho ma siiyaan carruur da’ walba ah.
Mararka qaarkood wuxuu ardaygu u baahan karaa taageero xagga dugsiga ah oo ka baxsan tan caadiga ah. Waxay taasi dhaceysaa iyadoo la sameynayo is waafajinno dheeraad ah oo ku aaddan wax baridda caadiga ah ama iyadoo dadaal dheeraad ah la sameynayo ama qaab dugsi oo gaar ah; dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman. Dugsiga hoose-dhexe ee caqliga dhiman waxaa loogu tala galay ardayda aan gaari karin heerka aqooneed ee dugsiga hoose dhexe leesaga baahanyahay iyadoo ay sababtu tahay in ay qabaan jiha wareen xagga koritaanka ah ama dhaawac xagga maskaxda ah oo joogto ah.
Dugsiga sare waa qaab waxbarasho oo lacag la’aan ah, aanna qasab ahayn oo aad dooran kartid in aad dhigatid ka dib marka aad dhameysid dugsi hoose-dhexe. Waxaad dugsi sare dalban kartaa ilaa aad ka buuxisid 19 sano jir.
Sollentuna waxaa ku yaalla dugsiga sare ee Rudbeck ee degmadu leedahay iyo tiro dugsiyo sar-sare ah oo xur ah. Dugsiyadaas sar-sare ee xurta ah waxaa iska leh mas’uuliyiin (milkiilayaal) kale oo aan ahayn dugsiga sare ee ay degmadu mas’uul ka tahay.
Marka aad dalbaneysid dugsi sare waxaad kala dooran kartaa barnaamijyo iyo takhasusyo kale duduwan. Qaar ka mid barnaamijyadu waxay xitaa yihiin kuwo qofka xirfad u diyaarinaya, kuwo kalana waa barnaamijyo xirfadeed. Xagga barnaamijka xirfadaha waxaa jirta fursad ah in la dhigto waxbarasho goobta shaqada lagu qaadanayo.
In boos laga raadsado dugsi
Waxaad dugsi boos ka codsaneysaa adigoo taas u isticmaalaya adeegga elekteroonigga ah ee barta intarneetka ee degmada. Halkan waxaad sidoo kale ka heleysaa filin luqado kala duduwan ah oo ku aaddan sida aad boos u raadsaneysid. Xarunta xiriirka ee degmada ayaa codsigaaga kaa caawin karta.
Intii afar usbuuc ah Jannaayo-Febraayo ayaad codsaneysaa booska xilli dugsiyeedka deyrta ee soo socda.
Bisha Maarso ama Abriil waxaad heleysaa warqad farriin ah oo ku aaddan dugsiga canuggaaga lagu meeleeyay midka uu yahay. Meeleynta dugsiga waa in dhammaan waaliddiintu ay xaqiijiyaan. Macluumaad ku aaddan sida aad taas u sameyneysid ayaa warqadda la socda.
Marka aad dugsi boos ka dalbaneysid waxaad xitaa dalban kartaa in canuggaaga wax loogu dhigo luqaddaada koowaad.
Guriga xilliga firaaqada waxaa loogu tala galay carruurta ilaa iyo 12 sano jir ee dhigta fasalka dugsiga xannaanada ama dugsi hoose-dhexe. Hawsha shaqadu waxay dhaceysaa galabtii ka dib marka waqtiga casharrada ee caadiga ah uu dhamaado. Taasi waxay dardar gelineysaa horuumarka iyo waxbarashada canugga, waxayna siineysaa xilli firaaqo oo micno leh iyo isku xirnaan bulshanimo.
Hawlaha guriga xilliga firaaqada waxaa tusaale ahaan la siin karaa carruurta ku qoran degmada Sollentuna iyo carruurta deggan degmada ee megengelyo doonka ah. Canuggaagu guriga xilliga firaaqada boos wuu ka heli karyaa haddii aad shaqeysid ama ugu yaraan aad shaqeysid waqtiga barkiisa, si firfircoon aad shaqo u raadsaneysid ama aad canugga walaalihiis fasax waalid kula jirtid.
Booska dugsiga ayaad booska guriga xilliga firaaqada la dalbaneysaa. Si la mid ah sida dugsiga xannaanada waxaad canuggaaga hawlaha xilliga firaaqada uga dhiibeysaa lacag khidmo ah. Inta ay la ekaaneyso lacagta khidmada ahi waxay ku xirantahay dakhligaaga, laakiin waxaa jirta in ugu badan oo la bixinaayo.
Taageerada iyo caawimaadda degmada
Haddii aad ku jirtid xaalad nugul waxay degmadu ku siin kartaa taageero nuucyo kala duduwan leh. Hey’adda adeegga bulshadu waxay kaalmo siineysaa dadka qaba dhibaatooyinka arrimaha bulshada iyo maandooriye adeegsiga. Waxay xitaa taageero iyo adeeg siineysaa dadka qaba cuuryaannimada xagga maskaxda.
Caawimaad loogu tala galay dadka gacan qaadka loo geysto
Haddii cid xigtadaada ahi ay kuu geysato handadaad iyo gacan qaad ama aad taqaannid cid waxaas loo geysto la xiriir hey’adda adeegga bulshada.
Gacan qaad xagga xigtadaada ah waxaa loola jeedaa fal kasta oo xanuun leh, cabsi leh ama meel ka dhac, sidaasna ay keeneyso in cid kale ay sameyso wax rabitaankeeda ka soo hor jeeda ama ay iska gaabsato. Badanaa waa falal isugu jira kuwo jir ahaaneed, kuwo galmo la xiriira iyo kuwo maskax ahaaneed. Tusaale ahaan: iyadoo lagu tuuro, timaha laga jiido, laguugu qasbo falal galmo la xiriira, handadaad toos ah ama aan toos ahayn ama in lagaa dhigo wax lagu qoslo, milicsiyo/hadal jir ahaaneed oo baqdin abuuraya, go’doomin reebeysa in uu qofku qaraabo ama saaxibbo la kulmo, ama in waxyaabaha uu qofku leeyahay laga jejebiyo ama si ku tala gal ah loo baabi’iyo.
Waqtiyada aysan xafiisyadu furneyn waxaad la xiriiri kartaa heeganka hey’adda adeegga bulshada. Haddii gacan laguu geysto waxaad beddel ahaan la xiriireysaa booliiska.
Taageerada dadka qaba naafanimada xagga maskaxda
Haddii aad qabtid naafanimo xagga maskaxda ah waxaad hey’adda adeegga bulshada iyo kuwo kale ka raadsan kartaa nuucyo kala duduwan oo taageero ah. Waxaad tusaale ahaan taageero u heleysaa sidii aad bulshada ugu soo bixi lahayd, in aad heshid wax aad ku hawlanaatid, in aad dad kale waqti la qaadatid, in aad dhawratid arrimaha maalinlaha ah iyo in aad mas’uul ka noqotid dhaqaalahaaga iyo/ama deegaankaaga.
Taageero ku aaddan maandooriye adeegsiga iyo deegaanka
Degmadu waxay leedahay rug qaabilaad oo loogu tala galay dadka waaweyn ee qaba dhibaatooyinka maandooriye isticmaalidda. Waxaa xitaa jirta rug qaabilaad oo loogu tala galay dhallinyarada qabta dhibaatooyinka maandooriye adeegsiga.
Haddii aadan adiga naftirkaagu masruufi karin naftaada iyo qoyskaaga waxaad codsan kartaa taageero dhaqaale oo ah taageero masruuf. Inta aan kaalmada la oggolaan waxaa la sameynayaa baaritaan, waxaana leesu dhigayaa shuruudo ku aaddan in aad sameysid wax kasta oo aad awooddid si aad naftirkaagu uga soo baxdid biilidda naftaada iyo qoyskaaga.
Xukuumadda ayaa si sanadle ah u goysa heerka kaalmada lacageed ee leesi siinayo. Lacagta qof kasta la siinayo waa isku mid waddanka oo dhan, waana in ay dabooshaa kharashaadka ku baxa raashinka, dharka iyo kabaha, waxyaabaha lagu ciyaaro iyo waqtiga firaaqada, maacuunta, caafimaadka iyo nadaafadda, wargeyska maalinlaha ah, taleefan iyo lacagta khidmada ah ee TV-ga. Waa suurta gal in kaalmo dhaqaale loo codsado xitaa waxyaabo kale, sida daryeel dhakhtar, dawo, dhakhtar ilko, ookiyaalo iyo wax dheeraad ah.
Haddii aad qabtid su’aalo ku aaddan kaalmada masruufka ama haddii aad dooneysid in aad codsatid waxaad la xiriireysaaxarunta xiriirka. Gacanhayayaasha xarunta xiriirka waxay ku weydiinayaan su’aalo la xiriira xaaladdaada dhaqaale, waxay ku siinayaan macluumaad, waxayna kuu soo dirayaan dukumiintiyada codsashada. Marka aad codsigaaga soo dirtid waxaa lagu siinayaa waqti booqasho. Hammiga hey’adda adeegga bulshadu waa in ay kula kulanto ugu dambeyn laba usbuuc ka dib marka aad codsatid kaalmada dhaqaale. Booqashada ka dib waxaannu gaareynaa go’aan.
Degmada Sollentuna waxay taageero ku bixineysaa waalidnimada laga billaabo inta uurka la leeyahay ilaa iyo inta uu canugga 18 ka buuxinayo. Waxaad ka waalid ahaan heli kartaa taageero gaar ahaaneed ama waxaad kala qeyb qaadan kartaa koox waaliddiin ah. Wax walba waa lacag la’aan. Sollentuna waxaa ka jira seddax xarumood oo qoys oo leh rugag caafimaad oo dhallaan, dugsi furan oo xannaano iyo la taliye arrimo bulsho oo isku hal meel wada ah. Waxaa sidoo kale iskaashi dhaw lala leeyahay umulisooyinka.
Taageero loogu tala galay adigaaga ah carruur/dhallinyaro
Haddii ay jiraan wax aad ka welwelsantahay, tusaale ahaan dhibaato qoyska gudihiisa ah, mar walba ku soo dhawaw in aad la soo xiriirtid rugta qaabilaadda ee xafiiska adeegga bulshada ee loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada ama rugta qaabilaadda dhallinyarada.
Rugta qaabilaadda dhallinyarada waxaad ka heli kartaa talo bixin ku aaddan galmada, waxyaabaha uurka looga hor tago, sameynta baaritaanka uurka, in aad iska baartid cudurrada xubnaha taranka ku dhaca, in aad heshid kaniiniga uurka looga hortago ee xaaladaha degdegga ah iyo soo qaadashada rabadhka galmada loo gashto (kondom). Rugta qaabilaadda waxaa loogu tala galay dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee da’ yarta ah ilaa iyo 22 sano jir. Halkaas waxaa ka shaqeeya umulisooyin, la taliyayaal xagga arrimaha bulshada ah iyo dhakhaatiir. In aad rugta booqatid lacag la’aan ayey adiga kuu tahay, shaqaalahana waxaa saaran waajib xog xafidid.
Bogagga intarneetka "Soc för unga" waxaa loogu tala galay adigaaga carruurta ah ama dhallinta ya. Halkan waxaannu ku sharraxeynaa kaalmada aad ka heli kartid hey’adda adeegga bulshada, sida aad noola soo xiriiri kartid iyo waxa dhacaya marka aad nala soo xiriirtid.
Taageerada dadka naafada ah, dadka da’da ah iyo xigtada
Haddii aad da’ tihid, aad naafanimo qabtid ama aad xigto u tahay qof taageero dheeraad ah baahi u qaba, markaa degmadu waxay ku siin kartaa kaalmo si ay nolol maalmeedkaaga u fududeyso.
Adigaaga u baahan taageerada
Waa muhiim in qofku uu gurigiisa amaan ku dareemo. Haddii, iyadoo ay sababtu tahay in aad da’ tihid, cudur qabtid ama naafanimo, ay kugu adagtahay in aad shaqooyinka caadiga ah qabsatid waxaad taageero iyo caawimaad guriga uga heli kartaa adeegga guryaha. Waxaad afar iyo labaatanka saac adeegga guryaha kaalmo ugu heli kartaan daryeel shakhsi ahaaneed, sida tusaale ahaan in lagaa caawiyo nadaafadda shakhsi ahaaneed iyo in dharka laguu geliyo- lagaana bixiyo. Laakiin waxaad xitaa taageero u heli kartaa waxyaabo kale oo loo baahanyahay si aad wacnaan iyo ammaan u dareentid. Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan kartaa xaaqitaanka iyo qurxinta guriga, dhar dhaqid iyo feereyn, caawimaad ku aaddan in rug caafimaad la tago, dhakhtar ama hawlo dhaqdhaqaaq, soo adeegasho ama in arrin la fuliyo. Haddii aadan naftirkaagu cunto karsan karin waxaa guriga laguugu keeni karaa cunto bisil oo meel ku jirta.
Adigaaga ka welwelaya in aad tusaale ahaan dhacdid ama khatar weyn ugu jira in uu cudur degdeg ah kugu dhacyo waxaad dalban kartaa in aad heshid alaami xagga ammaanka ah. Alaarmiga ammaanku waa taleefan sammaacad leh oo lagu xirayo gurigaaga, lehna badhan qeylo dhaan oo aad qoorta ku xiraneysid ama aad ku sidaneysid cumaacumta gacanta. Alaarmigu wuxuu kuu suurta gelinayaa in aad la xiriirtid shaqaalaha marka ay jiraan xaalado aad horay loo saadaalin karin. Marka aad qeyla dhaanta dirtid haddii uusan shaqaaluhu xiriir kula sameyn karin gurigaaga ayey soo aadayaan.
Baahi waafajinta deegaanka
Haddii, iyadoo ay sababtu tahay cudur ama naafanimo, aad u baahantihid in deegaankaaga dib u habeyn lagu sameeyo waxaad codsan kartaa kaalmo ku aaddan in degaanka dib loo dhiso si uu u waafaqsanaado baahidaada.
Adeegga safarka bukaanka
Adigaaga ay aad kuugu adagtahay in aad iskaa u guurguurtid ama ku safartid gaadiid dad weyne waxaad dalban kartaa adeegga safarka bukaanka, macnaha in laguugu qaado gaari taksi ah ama gaari weyn si gaar ah baahida loo waafajiyay.
Adigaaga naafanimada qaba
Haddii aad naafanimo qabtid waxaad heli kartaa caawimaad nuucyo kala duduwan leh. Degmada ayaa ku qori karta qof kaa caawiya in aad gaadiid u raacdid meelaha aad dooneysid, haddii loo baahdana ku tusaya waddooyinka gaadiidka dad weynaha.
Waxaad xitaa caawimaad u heli kartaa in kaaliye shakhsi ahaaneed uu kuu qabto nadaafadda shakhsiga ah, cuntada, dhar gashiga iyo dhar iska bixinta, in dadka kale lala xiriiro ama wax kale oo aad maalin kasta u baahantihid.
Haddii aad naafanimo qabtid, aadna u baahantihid taageero ilaa heer ah si aad gurigaaga u maamulatid, ama aad billawdid shaqooyin kala duduwan, waxaad caawimaad ahaan u heli kartaa taageero deegaan.
Degmada waxay xitaa dadka naafada ah u abaabuleysaa hawlo la xiriira bulshanimada, tusaale ahaan qoob ka ciyaar galbihi ah oo ka dhacaya Arena Satelliten, tartan muusko ama biibito muusiko.
Hawlo wax qabasho oo maalinle ah
Haddii aad dugsigi dhamaysatay oo iyadoo ay naafanimo sabab u tahay aadan heli karin shaqo waxaa laguu oggolaan karaa hawl wax qabasho oo maalinle ah. Hawl wax qabasho oo maalinle ah waa nooc ka mid ah goobaha shaqada. Hawlaha wax qabadku wey kala duduwanyihiin iyadoo ku xiran hadba meesha aad dooraneysid in aad ka shaqeysid. Ula jeeddadu waa in aad heshid wax micno leh oo aad maalinti sameysid.
Deegaan loogu tala galay adigaaga naafanimada qaba
Haddii aad caawimaad badan u baahantihid laga yaabee in aadan la degi karin qoyskaaga. Markaas waxaad codsan kartaa deegaan ay joogaan shaqaale ku caawin kara. Waxaad sidoo kale codsan kartaa in aad si ku meel gaar ah u dhex degid qoys taageero, guri waqti gaaban ah ama xero soo kabsasho ama jawi beddelasho.
Qof lala xiriiro
Qof lala xiriiro wuxuu u shaqeeyaa sida saaxib; cid lala hadlo, waqtina lala qaato. Tusaale ahaan waad isla qaxweyn kartaan, shaleemana waad isla aadi kartaan. Qofka lala xiriirayo waa in sidoo kale xaaladaha maalinlaha ah uu kaa siin karyo talooyin iyo taageero.
Adigaaga da’da ah
Hawl wax qabad oo maalmeed
Hawl wax qabad oo maalmeed waxay ka dhigantahay in taageero maalintii uu qofku degmada ka helayo iyo in uu ka qeyb qaadan karyo hawlo dhaqdhaqaaq oo kala duduwan oo wadaag ah. Waxaa taas la siin karaa adigaaga da’da ah ee naafanimada qaba ama adigaaga cudurka maandhowga si laguugu fududeeya in aad guriga sii degganaatid iyo in aad dadka kale xiriir la lahaatid. Hawsha wax qabadka ee maalintii ah waxaa sidoo kale la siin karaa dadka xigtada guriga ku xannaaneeya si looga fududeeyo culeyska. Inta la joogayo waxaa la waafajinayaa hadba karaanka, baahida iyo rabitaanka.
Hawlo firfircooni oo loogu tala galay dadka da’da ah
Hawlo firfircooni oo fara badan ayaa laguu abaabulayaa adigaaga da’da ah ee doonaya in uu aad xilli firaaqo oo firfircooni leh ku heshid Sollentuna. Waxaad macluumaad dheeraad ah ka heli kartaa på www.solom.se.
Waxyaabo wax caawiya
Haddii aad tihid 65 ama qof ka weyn oo ay kugu adagtahay in aad dhaqdhaqaaqdid waxaad degmada ka deynsan kartaa qalab wax caawiya oo kala duduwan, tusaale ahaan cuksi soconaya iyo kursi soconaya.
Deegaan dadka waaweyn loogu tala galay
Haddii aadan guri sii degganaan karin waxaa jirta fursad ah in aad codsatid in aad deegaan kale u guurtid. Waxaa jira noocyo kala duduwan oo deegaanka dadka da’da ah iyadoo ku xiran inta taageero iyo caawimaad ee aad deegaanka ugu baahantahay. Waxaa intaas dheeraad ah in degaannadu ay noqon karaan deegaanno waqti gaaban ah- ama kuwo waqti dheer ah iyo kuwo la waafajiyay baahida dadka cudurka maandhowga qaba.
Adigaaga xigtada u ah qof aan nolol maalmeedka iskiis isu bixin karin
Taageerada xigtada waxaa loogu tala galay adigaaga caawiya, taageerana qof aan iskiis nolol maalmeed isu bixin karin iyadoo ay sababtu tahay da’, cudur jir ahaaneed ama maskax ahaaneed oo muddo dheer jiraya, maandooriye adeegsi ama naafanimo. Taageerada xigtadu waxay tusaale ahaan abaabuleysaa hawlo sida talo siin iyo hagitaan, wadahadal taageero, kooxo xigto ah, muxaadarooyin iyo taageer laguugu tala galay adigaaga qaba cudurka maandhowga,, waxayna fursad kuu siineysaa in aad la kulantid xigto kale oo ku jirta xaalad taada la mid ah. Qofka aad daryeeleysid wuxuu noqon karaa xubin qoyska ka mid ah, saaxib ama deris. Adiga naftirkaaga ayaa go’aan ka gaaraya haddii aad xigto tihid.
Haddii xigto ahaan aad u dooneysid in aad taageero heshid la xiriir degmada.
Dhaqan iyo xilli firaaqo
Sollentuna gudeheeda waxaa ka jira wax badan oo loogu tala galay adigaaga ka helo isboortiga, dhaqanka iyo dabiicada.
Swiidhan xilliga firaaqadu waa muhiim, dad badanna waxay waqti geliyaan isboortiga ama danaha xilliga firaaqada marka aysan dugsi ama shaqo lahayn. In urur lala galo dad kale oo isku wax la daneeyo waxay adiga waddanka ku cusub kuu noqon kartaa qaab aad saaxibbo ku heshid, kuna baratid af-swiidhishka.
Isboorti iyo jimicsi
Carruur badani si wada jir ah ayey ururro isboorti isugula tababartaan. Halkan waxaa ka jira 64 urur oo bixinaya 33 isboorti oo kala duduwan.
Meelo badan waxaa ka jira meelo jirdhis oo dibadda ah, waddooyin lagu jimicsado iyo goobo isboorti oo loogu tala galay baaskidka, innebaandiga iyo kubadda cagta. Goob alwaax ku socodka lagula ciyaaro sidoo kale wey ka jirtaa dhismada isboortiga ee Sollentunavallen, halkaas oo uu sidoo kale ka jiro baraf loogu tala galay kabo baraf ku sibxashada.
Hoolka dabaasha ee Sollentuna wuxuu leeyahay berkad 25 mitir ah iyo berkad yar. Waa in aad 12 sano jirtaa, aadna 200 mitir dabaalan kartaa si aad kaligaa hoolka dabaasha u soo booqan kartid. Si loo helo dabaal nadiif ah oo dhammaan dadka u aamin ah, waxaa xitaa jira waxyaabo kale oo ay tahay in laga fikiro inta aadan imaannin. Fadlan akhri xeerarka dabaasha [isku xire] inta aadan booqan hoolka dabaasha.
Maktabadda waxaa yaalla buugaag ku qoran in ka badan 20 luqadood. Adigaaga ah qof waddanka ku cusub, aanna heysan aqoonsi swiidhish ah waxaad heli kartaa kaar maktabadeed oo ku meel gaar ah. Qolka Ny i Sverige waxaa yaalla buugaag leh koorsooyin luqadeed, wargeysyo luqado badan oo kala duduwan ah iyo kumbuyuutar aad ka akhrisan kartid wargeysyo dibadda ah. Halkan waxaa xitaa ka dhacan isla qaxweynta luqadda iyo tala bixinno ay bixinayaan tabarrucayaal tusaale ahaan ka socda kaniisadaha Swiidhan iyo Laanqayrta Cas.
Dugsi dhaqan oo carruurta iyo dhallinyarada loogu tala galay
Dugsiga dhaqanka ee Sollentuna wuxuu xagga muusika, qoob ka ciyaarka, tiyaatarka, sawirka iyo qoridda ku bixiyaa waxbarasho loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada u dhexeysa 3 iyo 21 sano jirrada. Koorsooyinka waxay ku kacayaan 500-1 100 xilli dugsiyeedkiiba. Waxaa jira kaalmo ay heli karaan qoysaska qaata kaalmada lacageed.
Meelo lagu kulmo oo dhallinyarada loogu tala galay
In badan oo dugsiga degmada ka mid ah waxay leeyihiin beero xilliga firaaqada la tago oo furan waqtiyada galbihii ah. Marka intaas laga reebo waxaa jira guriga weyn ee dhallinyarada ee Arena Satelliten.
Kaynta ama juqda aad!
Swiidhan waxaad si xur ah ugu dhaqdhaqaaqi kartaa dabiicada, xitaa dhul uu qof kale leeyahay. Sollentuna gudeheeda waxaa ka jira aagag dabiici ah oo laguugu soo dhaweynayo. Järvafältet-na waxaa ku yaalla beer ay joogaan lo’, fardo, doofaarro iyo ido aad booqan kartid. Halkan waxaa ku yaalla goobo wax lagu dubto oo qoryo leh.